Deg Deg:Meydkii Marxuum C/laahi Yuusuf oo Gaalkacyo loo duuliyey si loogu aaso – SBC
Deg Deg:Meydkii Marxuum C/laahi Yuusuf oo Gaalkacyo loo duuliyey si loogu aaso
Iyadoo meydkii Madaxweynihii hore ee dawlada KMG Soomaaliya Marxuum C/laahi Yuusuf Axmed saaka la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho isla markaana salaadii Janaasada lagula tukaday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ayaa markii ay dhamaatey janaasadii waxaa loo duuliyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobilka Mudug halkasi oo lagu aasayo.
Tukashadii salaada Janaasada meydka ALLE ha raxmadee C/laahi Yuusuf waxaa ka qayb gashay madax kala duwan oo ka tirsan dawlada KMG Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra’isalwasaare Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), golaha wasiirada, Baarlamanka iyo qaybaha kale ee dawlada.
Salaada Janaasada ka dib waxaa hadalo kooban goobtaasi ka jeediyey qaar ka mid ah madaxda dawlada sida Madaxweynaha & Ra’isalwasaaraha kuwaasi oo ka hadley aragtidooda ku aadan geerida Madaxweyne C/laahi Yuusuf.
Sheekh Shariif “Dhamaan wixii Deyn lagu lahaa C/laahi Yuusuf dawlada ayaa bixinaysa”
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo hadal kooban ka jeediyey goobtii salaada Janaasada lagula tukumaday Marxuum C/laahi Yuusuf ayaa waxaa uu sheegay in dawlada Soomaaliya ay bixin doonto dhamaan wixii deyman lagu lahaa Madaxweyinihii hore, isagoo s gaar ah u mahadceliyey dawladaha Yemen & Imaadaaradka Carabta sidii gaarka aheyd ee ay ula socdeen xaalada Madaxweynihii hore.
Sheekh Shariif waxaa kale oo uu sheegay in C/laahi Yuusuf ay lahaayeen xiriir wanaagsan oo ay khadka telefoonka ku wada sheekeysan jireen waxaana uu sheegay in uu ahaa shakhsi ay ku weyn tahay Soomaalinimada & horumarka ummada Soomaaliyeed, waxaana uu ka codsadey Ummada Soomaaliyeed inay iska cafiyaan walaalkood ayna u duceeyaan.
Dhinaca kale Ra’isalwasaare C/wali Maxamed Cali (Gaas) oo isna hadal kooban jeediyey ayaa ku tilmaamay C/laahi Yuusuf in uu ummada Soomaaliyeed ku leeyahay taariikh, waxaana uu sheegay in uu ILAAH uga baryayo in uu Jannadiisa fardowsa ka waraabiyo.
Intaasi ka dib meydka marxuumka waxaa loo qaaday magaalada Gaalkacyo halkaasi oo lagu aasayo maanta, waxaana diyaaradii qaadey meydka horey u sii raaciyey xubno ka mid ah gudigii loo xilsaaray aaska madaxweynihii hore iyadoo sidoo kale ay diyaarada la socdeen qoyska marxuum Yuusuf.
Sawirada & muuqaalka tukushadii salaada Janaasada insha ALAAH waxaan idin soo gudbin doonna saacadaha soo socda.